Sintomy Qantas Ultimate Pack 2012 FS2004 - Freeware
Mahafinaritra tena tany am-boalohany fonosana misy ny Airbus A380-861 amin'ny virtoaly cockpit (tsy 2d tontonana) sy ny kalitao feo, miampy ny seranam-piaramanidina fiara fitaterana sy ny afaka manidina, samy amin'ny loko ny Qantas (Queensland Ary Northern Territory Aerial Services Limited) Aostralia orinasa , fa koa iray amin'ireo lehibe indrindra eo amin'izao tontolo izao.
- Ny Airbus A380 dia fehezina ihany no avy amin'ny virtoaly cockpit (VC) Anisan'ny textures DXT3 (FPS sariaka) sy HD 32 nanaikitra textures, ihany koa dia ahitana ny tsara 3D efitra anatiny.
- Ny afaka manidina Goodyear blimp K-Class Blimp NEAM "Famerenana amin'ny laoniny" mirakitra ny VC sy ny 2d tontonana (zava-dehibe, dia vakio ny boky)
- Ny seranam-piaramanidina v3 fiara fitateram-bahoaka dia noroahina niala tamin'ny 2D tontonana (tsy VC) dia tokony ho toerana tsara tarehy Multiplayer lalao na sary na horonan-tsary. Fiara fitateram-bahoaka ity dia manana endri-javatra mamela azy io mba hameno amin'ny solika, ary triatra ny kodiarana, dia mety ihany koa ny manidina! (Vakio ny toromarika tafiditra)